Sheekh Hasina oo Mar Kale Loo Doortay Ra’iisalwasaaraha Bangladesh | Baligubadlemedia.com
Sheekh Hasina oo Mar Kale Loo Doortay Ra’iisalwasaaraha Bangladesh
Ra’iisalwasaaraha dalka Bangladesh Sheekh Hasina ayaa mar saddexaad loo doorto xilkaasi ka dib doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday shalay oo Axad ahayd, sida uu sheegay guddiga doorashooyinka dalkaasi.
Mucaaradka dalkaasi ayaa cambaareeyay waxa uu ku tilmaamay doorashada “khiyaaliga ah” ee ay hareeyeen rabshado, handadaad iyo eedeymo ah in lagu shubtay doorashadaasi.
“Waxaan ugu baaqeynaa guddiga doorashooyinka in si deg deg ah uu laalo natiijadan khiyaaliga ahi,” ayuu yiri Kamaal Xuseen oo ah hoggaamiyaha mucaaradka.
“Waxaan dalbaneynaa in sida ugu dhakhsaha badan loo qabto doorasho cusub oo ay maamuleyso dowlad dhexdhexaad ah.”
Xisbiga ra’iisalwasaare Sheekh Hasina ee Awami League ayaa dalkaasi Bangladesh soo xukumayay tan iyo sandkii 2009, balse mid ka mid ah xisbiyada ugu waaweyn mucaaradka ayaa ku eedeeyay in goobaha qaar ee codbixinta uu xisbigaasi keensaday sanaadiiq ay ka buuxaan waraaqaha codbixinta oo been abuur ah.
Sarkaalkii mas’uulka uga ahaa goobtaasi guddiga doorashooyinka ayaa ka gaabsaday in uu ka hadlo arrintaasi.
Sheekh Hasina ayaa jimcihii la soo dhaafay BBC-du u sheegtay: “Dhan waxa ay jeedinayaan eedeymo. Dhanka kalena, waxa ay weerarayaan shaqaalaha iyo madaxda xisbigayaga. Taasi ayaa ah dhibaatada ugu weyn ee ka jirta dalkayaga.”